Na oviana na oviana ny fanananao dia mitandrema amin'ny zavatra tsapanao fa mendrika sy manana vidiny ao an-tsainao amin'ny fotoana rehetra izay hivarotanao azy. Ny fananganana portfolio dia asa tena mahafa-po, saingy tsy afaka mandeha tsara ianao raha manao tombony tsara.
Tsy tokony hapetraka ao anatin'ny toe-tsaina izay tsy hivarotanao ny fananana fananana iray ianao, tsy misy maharatsy ny fananana vidin-javatra avo lenta na fametrahana tarehimarika izay tsy mendrika ny hivarotra ny vidiny fotsiny tsena ary manahirana ny mahita trano hafa.
Ny vidin-tseraseranao mety dia tokony hahatonga anao hieritreretana ny antony rehetra mifandraika amin'ny fitazonana, fivarotana & fividianana. Indrisy anefa fa misy vidiny ahafahana mivarotra, Ity no vidiny tokony ho fantatra, na dia tsy azo tanterahina amin'izao fotoana izao.
Izany dia mitazona anao ao amin'ny tontolo tena izy ary manakana anao tsy hijanona ao an-tsainao, avelao ny olona ao amin'ny indostria mahafantatra fa ny tranonao dia mividy "amin'ny vidiny tsara", angamba manana taratasy vita printy miaraka amin'ny trano sy ny vidiny, afaka Avelao ho gaga ny amin'izay mety hividianana ny mpividy.
Tadidio fa misy ny vidim-panekena azo ekena ho an'ny olona hahazoana portfolio ny fananana izay mamela ny vidin'ny fametrahana ny portfolio amin'ny fotoana & ny vola Afaka ampidirina amin'ny lanja manan-danja sy azo ekena amin'ny mpividy iray ianao, dia mety ho andoavam-bola ho an'ny olona "vola manankarena - mahantra".
Ny zavatra rehetra azo amidy
Amin'ny vidiny tsara!
(na tokony ho!)